योगको उचित विधी र स्वास्थ्य लाभ – Daunne News
योगको उचित विधी र स्वास्थ्य लाभ
नियमित र सही ढंगले गरिने योग अभ्यासले शरीरलाई लचिलो, फुर्तिलो, बलियो, तन्दुरुस्त र स्वस्थ राख्छ । योगले स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यद्यपि योगबाट कसरी स्वास्थ्यमा लाभ मिल्छ ? योग गर्ने खास तौर–तरिका के हुन् ? कस्तो अवस्थामा योग गर्नु उचित हुँदैन ? कस्तो योग आसन एंव विधी बढी सबैका लागि उपयुक्त हुन्छ ? यसबारे भने सबै जानकार नहुन सक्छन्।
खासगरी योगमा शरीर, दिमाग र सास तीन चिजको तालमेल हुन्छ। जब यी तीन एक लयमा हुन्छ, हामी स्वस्थ्य हुन्छौं। तनाव मुक्ती, आन्तरिक शान्ति, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, उर्जा बढाउन, शरीरको लचिलोपन पाउन योगको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
योगका लागि केवल ताकत, सन्तुलन र लचिलोपन चाहिन्छ। जो कोहीमा यसमध्ये एक चिज हुन्छ, जसको मद्दतले अर्को काम सजिलै गर्न सक्छन्। नियमित रुपले योग गर्ने जसरी तौल नियन्त्रण हुँदै जान्छ, उसैगरी शरीर लचिलो पनि।
दिनमा कुनैपनि समय योग गर्न सकिन्छ। तर, खाना खानसाथ तुरुन्तै योग गर्नु हुँदैन। बिहान खासगरी सूर्योदय लगत्तै योग गर्नु बढी लाभदायक हुन्छ। सूर्योदयको दुई घण्टासम्म आफ्नो सुविधा अनुसार योग गर्न सकिन्छ। खासगरी बिहान शान्त र स्वच्छ वातावरण हुन्छ। साथै हाम्रो दिमाग पनि शान्त हुन्छ।
योग गर्दा शान्त, खुला स्थान बढी उपयोगी हुन्छ। दुर्गन्धित, कोलाहालपूर्ण स्थानमा योग गर्नु राम्रो हुँदैन। घरको छत, बगैंचा वा खुला कोठा जहाँ पनि योग गर्न सकिन्छ। योग गर्दा सजिलो पहिरन लगाउनुपर्छ। योग गर्ने स्थान पनि सजिलो हुनुपर्छ। योग गरिरहँदा कुनैपनि उपकरण राख्नु हुँदैन। जस्तो कि घडी, मोवाइल बोक्नु हुँदैन ।
योग गर्नुअघि खाली पेट हुनुपर्छ?
मासिक धर्म वा गर्भावस्थामा पनि योग गर्न सकिन्छ। यद्यपि यसका केही सीमा छन्। आसन छन् खासगरी महिलाले उल्टो भएर गरिने आसन गर्नुहुँदैन। सहज योगासन गरिरहँदा कुनै असजिलो भएमा त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ।
आसन नहुदा पनि प्रयास गर्नुपर्छ ?
आसन गरिरहँदा शरीरमा कुनैपनि किसिमको अनावश्यक दवाव दिनुहुँदैन । शरीरलाई असहज हुनेगरी वा बलजफ्ती योग गर्नु हुँदैन। किनभने शुरुवाती चरणमा मांसपेशी लचिलो हुँदैन । यस्तो अवस्थामा योग गर्दा विभिन्न समस्या आइपर्न सक्छ। संयमित भएर योग गर्नुपर्छ। योग गरिरहँदा शरीरले सहज अनुभव गर्नुपर्छ।
योगासन लगत्तै नुहाउन सकिन्छ?
योग पनि एक किसिमको शारीरिक व्यायाम हो, जसबाट शरीरमा उर्जा प्राप्त हुन्छ। योग लगत्तै नुहाउँदा उर्जा कम हुन्छ। त्यही कारण व्यायाम जस्तै योग गरेपछि लगत्तै नुहाउनु हुँदैन। २० मिनेट अन्तरमा नुहाउन सकिन्छ ।